धमाधम सेयर उठाउँदै नागरिक स्टक डिलर, कस्ता कम्पनी किन्दैछ? :: कमल नेपाल :: Setopati
धमाधम सेयर उठाउँदै नागरिक स्टक डिलर, कस्ता कम्पनी किन्दैछ?
मार्केट मेकरको रुपमा रहेको नागरिक स्टक डिलरले हाल दोस्रो बजारबाट धमाधम सेयर खरिद गर्न थालेको छ।डिलरले खरिदबिक्री कोड ‘डी०१’ नम्बर बाट सेयर खरिद बढाएको हो।
आइतबार २ करोड ९ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद गरेको डिलरले सोमबार १ करोड ९५ लाख, मंगलबार ३ करोड ११ लाख र बुधबार ३ करोड ९ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद गरेको छ।
खरिद मात्रै नभई डिलरले केही सेयर बिक्री समेत गरेको छ। बुधबार ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गरेको छ। डिलरले आफ्नै सिस्टमबाट सेयर खरिदबिक्री गर्ने गरेको छ। डिलरलाई सेयर खदिरबिक्रीमा ब्राेकर कमिसन शुल्क तिर्नु पर्दैन।
योबाहेक ब्रोकर कम्पनीहरुमार्फत पनि डिलरले खरिद गर्ने गरेको छ। २३ वटा ब्रोकर कम्पनीमार्फत डिलरले सेयर खरिद गर्ने गरेको छ। डिलरले एक पटकमा खरिदका लागि न्यूनतम १ हजार कित्ता अर्डर मात्रै पोष्ट गर्न सक्छ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) महेश्वरलाल श्रेष्ठका अनुसार डिलरले केही दिनदेखि नै दोस्रो बजारबाट सेयर उठाउँदै आएको हो। ‘एकैपटक ठूलो संख्यामा सेयर बिक्री गर्ने हुँदैनन्, आफ्नै रणनीतिअनुसार किन्दै जान्छौं, बेच्दै पनि जान सक्छौं’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
सेयर बजारलाई स्थायित्व दिने उद्देश्यले डिलर संचालनमा आएको हो। हालै डिलरले दक्ष जनशक्ति थप गरेको छ। ‘अहिले हामीले विचार पुर्याएर सुरुआती रुपमा लगानी गर्न थालेका छौं, पछि अनुभव पनि बटुल्दै जाँदा लगानीको आकार ठूलो हुनेछ’ उनले भने।
डिलरले बजारलाई स्थायित्व दिन मद्दत पुग्नेछ। मार्केट डिलर नहुँदा बजारमा छोटो समयमै तीव्र उतारचढाव हुँदै आएको थियो। सेयर मूल्य घट्दा खरिद बढाउने र मूल्य बढ्दा आपूर्ति बढाएर बजार सन्तुलित बनाउन डिलरको भूमिका हुन्छ।
‘उपयुक्त न्यून मूल्यमा किन्न खोज्दा एकैपटक धेरै सेयर पाइँदैन, तसर्थ सबै पुँजी एकैपटक पनि लगाइँदैन’ उनले भने ‘बढी मूल्यमा बेच्न खोज्दा पनि माग हुँदैन, यो भनेकै बजार स्थायित्वमा आउनु हो।’
डिलरले अब थोरै थोरै परिमाणमा सेयर खरिद गर्दै जानेछ। ५ अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीले हालसम्म संस्थापक सेयरधनीबाट मात्रै साढे ३ अर्ब रुपैयाँ पुँजी जुटाएको छ। त्यही पुँजी पनि पुरा रुपमा परिचालन गर्न नसकेको अवस्था रहेको श्रेष्ठले बताए।
डिलरमा नागरिक लगानी कोषको ५१ प्रतिशत, नेपाल टेलिकमको ९ प्रतिशत, पुनर्बीमा कम्पनीको १० प्रतिशत संस्थापक सेयर स्वामित्व छ।
कम्पनीले सर्वसाधारणलाई थप ३० प्रतिशत सेयर (आइपिओ) दिएर पुँजी उठाउनै बाँकी छ। उपयुक्त समयमा सर्वसाधारणलाई सेयर दिएर डेढ अर्ब रुपैयाँ उठाउनेछ।
अहिले बिउ पुँजीबाट नै लगानी सुरुआत गरे पनि विभिन्न उपकरणमार्फत ठूलो रकम जुटाउन सक्नेछ। ‘आवश्यक ठानिएको अवस्थामा दीर्घकालीन समयमा टेलिकम, विभिन्न कोषहरु, बीमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि स्रोत जुटाएर लगानी हुन्छ’ उनले भने।
स्रोत जुटाउनका लागि म्युचुअल फण्डजस्तै विभिन्न योजनाको बास्केट फण्ड स्थापना गर्ने कम्पनीको लक्ष्य छ। यी योजनाबाट जुट्ने कुल रकम पछि खरबमा पुग्न सक्नेछ।
डिलरले कति प्रतिफल दिँदै जान सक्छ, योजनाको सम्पत्ति (सेयर) मूल्य कति बढ्दै जान्छ त्यसमा पनि स्रोत कति जुट्छ भन्ने विषय भर पर्नेछ। नयाँ आर्थिक वर्षदेखि नै बास्केट फण्डको तयारी गरिने श्रेष्ठले बताए।
साथै सर्वसाधारणले समेत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने उनको भनाइ छ। बैंकबाट पाइने ब्याजदरभन्दा त्यस्ता योजना बढी प्रतिफलमूलक भएमा लगानी जुटाउन असहज हुने छैन।
श्रेष्ठका अनुसार अहिले नै यो आवश्यकता भइ नसकेको र आवश्यक ठानिएका बेला प्रक्रिया अघि बढाइने छ।
डिलरको सुरुआती रोजाइमा कस्ता कम्पनी परेका छन् ?
डिलरले कस्ता कम्पनीको सेयर खरिद गरेको होला भन्ने कौतुहलता लगानीकर्तामा देखिन्छ। डिलरले खरिद गर्दा आपूर्ति नियन्त्रण हुने र त्यसले मूल्य बढ्नलाई बल पुग्ने अनुमानले पनि लगानीकर्ता त्यस्ता कम्पनीमा आकर्षित हुन सक्छन्।
तर डिलरले आफ्नो रणनीतिअनुसार सेयर खरिद गर्ने भएकाले यसको पछि नलाग्न सिइओ श्रेष्ठले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई सुझाव दिन्छन्।
‘हामीले सेयर मूल्य घट्दा खरिद झन् बढाउन सक्ने क्षमता राखेर आफ्नै रणनीतिमा चल्छौं,’ उनले भने ‘लामो अवधि हेर्छौँ, तर लगानीकर्ताको स्रोत निश्चित हुन्छ, छोटो अवधिको लक्ष्य हुन सक्छ, त्यसकारण स्वविवेकमा अघि बढ्नुपर्छ।’ लगानी गर्ने कम्पनीका बारेमा केही न केही जानेर मात्रै लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले डिलरलाई कुल ३९ वटा कम्पनीको सेयर खरिदका लागि अनुमति दिएको छ। यसको अर्थ आफ्नै सिस्टमबाट यी ३९ र अरु कम्पनीको सेयर ब्रोकर कम्पनीमार्फत डिलरले खरिद गर्न सक्नेछ।
डिलरलाई आफ्नै सिस्टमबाट २६ वटा वाणिज्य बैंकको सेयर खरिद गर्न अनुमति दिएको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सर्वसाधारणलाई सेयर जारी नभएका कारण सोबाहेकका बैंकको सेयर डिलरले खरिद गर्न सक्नेछ।
त्यस्तै ७ वटा विकास बैंक एक्सल, गरिमा, ज्योति, कामना, मितेरी, मुक्तिनाथ, साइन रेसुङ्गा विकास बैंकको सेयर डिलरले खरिद गर्न पाउँछ।
४ वटा लघुवित्त कम्पनी छिमेक, आरएमडिसी, आरएसडिसी र साना किसान विकास लघुवित्तको सेयर उठाउन सक्नेछ। तारागाउँ रिजेन्सी होटलको सेयर खरिद गर्न पाउनेगरी स्टकले डिलरलाई अनुमति दिएको छ।
आइतबार साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक, सनराइज बैंक, एभरेष्ट, माछापुच्छ्रे, कुमारी, इन्भेष्टमेन्ट, नेपाल, एनसिसी, नेपाल बंगलादेश, प्रभु, कामना सेवा विकास, एसबिआई लगायत कम्पनीको सेयर खरिद गरेको छ।
त्यस्तै सोमबार आइतबार खरिद भएका केही कम्पनीसहित मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक, ग्लोबल आइएमई, बैंक अफ काठमाण्डु, लक्ष्मी, सानिमा, आरएसडिसी लघुवित्त, सिटिजन्स, प्राइम, एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर खरिद गरेको छ।
मंगलबार तीमध्ये केही कम्पनी थप गर्दै सिद्धार्थ, एनआइसी एसिया, मेगा बैंक, गरिमा विकास, ज्योति विकास, कृषि विकास, साना किसान विकास बैंकको सेयर खरिद भएको छ। बुधबार पनि यसअघि खरिद गरिसकेका कम्पनी नै डिलरले खरिद गरेको छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख ८, २०७८, २३:०८:००
सेयर बजार नेप्से परिसूचक १७ महिनायताकै न्यून
आज रिभर फल्स पावरको आइपिओ बाँडफाँट हुँदै
कुवेती दिनार एकको बिक्रीमा ४०६ रूपैयाँ पाइने, यस्तो छ आजको विदेशी मुद्रा विनिमय दर
सिद्धार्थ बैंक ‘दक्षिण एशियामा सर्वश्रेष्ठ सञ्चालन बैंक २०२१’ अवार्डबाट सम्मानित